DIB U XASUUSIN: Liiska Xidigaha Caanka Ah Ee 2017 Ka Fariistay Ciyaarta Kubada Cagta [Ogow] » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
James Oo Ka Hadlay Dhibaatada Real Haysata & Hadii Ay Kasoo Laaban Karto Kooxda Zidane
James Oo Fariin Beer-laxowsi Ah U Soo Direy Zidane Kadib Markii Uu Xagaagan Ka Ceyriyay Real
Home/ England/DIB U XASUUSIN: Liiska Xidigaha Caanka Ah Ee 2017 Ka Fariistay Ciyaarta Kubada Cagta [Ogow]
Waxaan sagootinay xalay saqdii dhexe 2017, waxaana soo dhaweynay sanadka cusub ee 2018, waxaana qof walba uu sanadkaan filayaa marka aan si gaar ah uga hadlno kubada cagta wax ka wanaagsan wixii soo maray sanadkii tegay.
Sanadkii tegay ee 2017, wuxuu ahaa mid ciyaarta kubada cagta ay isaga baxeen qaar kamid ah Halyeeyadii kubada cagta ugu caasaneed, kuwaasoo kusoo wada guuleystay dhacdada ugu weyn kubada cagat ee koobka aduunka
Hadaba, hoos ka arag liiska ciyaartoydaas:
Jaa’izadda Ballon d’Or, koobabka kala ah: World Cup, Champions League, Serie A, LaLiga, Club World Cup, UEFA Super Cup, Copa Del Rey iyo Supercoppa Italiana, dhamaan wuu ku guuleystay ciyaaryahan sarre Kaka.
35-sano jirkaan oo ku dhawaaqay inuu iska siibay kabaha kubada cagta bishii December, ee sanadkii tegay ayaa waxay timid kadib markii uu ka dhamaaday qandaraaskii uu kula jiray kooxda Orlando City, ee dalka Mareykanka
Kaka, ayaa qeyb kamid ah waayihiisa ugu fiican wuxuu ku qaatay kooxda dalka Talyaaniga ka dhisan ee AC Milan, kadib markii kaga soo biiray naadigaas dhigeeda Sao Paulo, sanadkii 2003
Wuxuu ahaa xidigii ugu dambeeyay ee guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or marka laga soo tago Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, wuxuuna ku muteystay hantay sanadkaas, koobabka Champions League, Super Cup iyo Club World Cup.
Kubad abuurahaan oo usaftay xulka qaranka kubada cagta Brazil, 92 kulan ciyaareed ayaa wuxuu udhaliyay dalkiisa dhamaan tartamada uu kala qeybgalay, misana uu difaacay Maaliyada qarankiisa 29 gool.
Mid kamid ah, ciyaartoydii ugu fiicneed ee Taarikhda soo martay Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarta kubada cagta bishii November ee 2017, wuxuuna soo gaba gabeeyay 22-sano oo uu ku jiray xirfadaan.
Pirlo oo kula guuleystay Talyaaniga koobka aduunka sanadkii 2006-dii ayaa wuxuu uqaaday laba jeer Champions League, kooxda AS Milan, wuxuuna sidoo kale hantay Lix jeer oo Serie A, xili uu uqala xulay kooxaha Rossoneri iyo Juventus.
38-sano jirkaan ayaa wuxuuu ahaa mid khadka dhexe si fiican ugu maamuli jiray kooxihii uu soo maray iyo qarankiisa, wuxuuna saftay 116 kulan, xili uu dhaliyay 13 gool, isagoona kabaha isaga siibay kooxda New York City ee Mareykanka.
Mucalimuu Totti, Ishii Roma, xidiga hal koox uhibeeyay xirafadiisa iyo mid kamid ah carurtii kusoo barbaartay Roma ayaa sagootin fiican loogu sameeyay bishii May ee 2017, isla garoonka kooxdaan ee Stadio Olimpico.
Kadib markii uu kasoo muuqday 786 kulan dhamaan tartamada oo dhan wuxuu udhaliyay 307 gool, waxaana intaas udheer inuu uqaaday Serie A-da sanadkii 2000-01, waxaana 40-sano jirkaan uu macsaalmeeyay waxaa oo sharaf ah.
Sidoo kale, wuxuu la qaaday Talyaaniga, koobka aduunka wuxuuna ku jiray xirfada kubada cagta 25-sano, waxaana shaki la’aan ah inuu kamid yahay ciyaartoydii ugu fiicneed ee soo martay xulka kubada cagta Azurri
Totti ayaa hada ah wuxuu Agaasime ka yahay kooxda AS Roma.
Hadii aad dooneyso inaad dhisto daafacyo dambeed oo buuxa, waxaad ka ak abuurtaa Philipp Lahm, Jookarkii hore ee Germany ayaa wuxuu kaga fariistay kubada cagta isagoo udheelaya koxoda Bayern Munich, bishii May 2017.
Daafacaan ku raaxeysan jiray garoonka ayaa wuxuu lasoo shaqeeyay Pep Guardiola, wuxuuna wiilkaan ku dhashay Magaalada Munich, uu la qaaday isla kooxdaan 13 koob, oo kala ah: Bundesliga DFB-Pokals iyo Champions League.
34-sano jirkaan ayaa wuxuu kusoo barbaaray kooxda Bayer, isagoona labo sano oo amaah ah kusoo qaatay kooxda kubada cagta Stuttgart, sidoo kale, qarankiisa Germany, ayuu la qaaday koobka aduunka 2014
Ciyaaryahankii hore ee qaranka Spain ayaa wuxuu ku qaatay ka dheelista khadka dhexe 18 sano, isagoona kusoo gaba gabeeyay xirfadiisa Bayern Munich, isagoona horumar ka sameeyay dalkiisa iyo kooxihii uu soo maray.
Taageerayaasha ayaa waxay ahaayeen kuwa aad ujecleysan jiray marka uu garoonka ku jirto, isagoona meel walba oo garoonka ah kasoo muuqan jiray, intii uu ku sugnaa kooxaha: Liverpool, Real Madrid iyo Bayern.
36-sano jirkaan ayaa ka hor inta uusan Madrid, ka caawin koobkeedii 12-aad oo UCL, ah sanadkii 2014 ayaa wuxuu dhaliyay goolkii soo laabasho ahaa oo ay Liverpool, kaga dhalisay AS Milan, Champions League, sanadkii 2005.
Alonso ayaa wuxuu kaloo ku guuleystay Sadex jeer oo Bundesliga ah, Labo jeer oo La Liga, iyo min hal jeer oo kala ah: UEFA Super Cup, FA Cup, Copa del Rey, DFB-Pokal, DFL-Supercup, Supercopa de Espana iyo Community Shield.
Wuxuu kaloo la qaaday xulka Spain koobka aduunka sanadkii 2017, sidoo kale, wuxuu kamid ahaa safkii hantay koobka European Championship sanadihii kala ahaa 2008 iyo 2012, xili uu guud ahaan usaftay Spain 114 kulan.
Mid kamid ah, ciyaartoydii ugu fiicneed ee soo martay kubada cagta England, ayaa waxay ahayd meeshii ugu dambeysay ee uu ka dheelo kooxda New York, isagoona ka baxay kubada cagta sanadkii 2017 bishii Febraayo.
39-sano jirkii hore ee Chelsea, ayaa wuxuu muujiyay tayo heer sare ah, markii ay taageerayaasha Stamford Bridge, umuujiyaa naceyb, xili uu ahaa mid laso baxay sanadihiisii ugu dambeysay kubad caajis ku dhisan
Kadib markii uu kasoo qalin jibiyay Akadeemiyadda West Ham, ayuu Lampard ku qaatay Chelsea 13-sano oo aan caadi ahayn, isagoona kula guuleystay 3 jeer oo EPL ah, Champions League oo hal jeer ah iyo koobka League oo laba jeer ah.
Wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu gooldhalinta badan kooxda kubada cagta Chelsea, intaas kuuguma filna ee waxaad ku darsataa, wuxuu udhaliyay qarankiisa England 106 kulan uu udheelay 29 gool – Macsalaama!!
*Ciyaartoda kale ee sanadkii 2017 ka baxday kubada cagta ayaa kala ah: Dirk Kuyt, Víctor Valdés, Martin Demichelis, Álvaro Arbeloa.
Kaka Lampard Philipp Lahm Pirlo Xabi Alonso
Guardiola Oo Ka Hadlay Hadii Uu Filayo In Sanchez Uu Sii Joogayo Arsenal Xili Ay Rabto Man City